Marka an file video MP4 qaadataa ilaa meel aad u badan ku wadid aad u adag ama aan ku haboonayn on kaadhka xusuusta, waayo, qalabka la qaadi karo si aad ah, waxaad u baahan tahay in la sameeyo MP4 yar. Waxaa intaa dheer in, waxa kale oo aad u baahan tahay inaad MP4 yar marka aad iyaga diyaarinaya web Upload, tan iyo goobo badan oo video qaybsiga online xaddido size video aad u geliyaan.
Tutorial waxa uu sharaxayaa sida loo sameeyo MP4 yar. Iyadoo Video Converter Wondershare ( Video Converter u Mac ) - software video kaamil ah riixo u video files digital ama DVDs compressing, aad si fudud u samayn kartaa MP4 video yar aan khasaaro wax ku ool ah oo tayo leh. Waxaa intaa dheer, barnaamijka wuxuu bixiyaa tiro balaadhan oo ah presets ugu Qalabka telefoonada gacanta iyo ciyaartoyda multimedia, si aan u baahan doontaa shahaado ah video injineernimada si loogu badalo videos for loo maqli karo ee qalabka kala duwan.
Sida loo sameeyo MP4 ku soo gudbin yar?
1 dar files diirada video
Ka hor inta aanan bilaabin download iyo rakibi Wondershare Video Converter. Markaas riix "Add Files" button in interface ugu weyn. Dooro videos aad rabto in aad si loo yareeyo xajmiga sanduuqa Add File wada hadal ah oo guji "Open" in ay soo dhoofsadaan. Waxa kale oo aad si toos ah u soo jiidi kartaa jeedi faylasha diirada video barnaamijka.
2 Qeex goobaha video
Riix ah "Settings" button ee geeska hoose ee saxda ah ee uu furmo suuqa hoose. Dooro codec video ah, tusaale ahaan H.264, ka Video qaab liiska, ama la codec default joogo. Markaas qabsato beegyada uu wax soo saarka kale ee sida xal, heerka yara iyo heerka jir adigoo gujinaya fallaadha ag khaanadda uu ka soo xusho liiska hoos-hoos.
Waxa kale oo aad si toos ah u samayn kartaa MP4 yar. Si tan loo sameeyo, doortaan "Size Small" doorasho, oo ku dhufatey "OK" button. Ka dib markii in, si aad u furmo suuqa ugu weyn ee ku soo laaban doonaa. Waxaad ka dareemi kartaa in tirada MP4 ayaa la dhimay.
Talo: Waxa kale oo aad yarayn kartaa size faylka by diinta qaab kale. Si tan loo sameeyo, guji image qaab dhinaca midig ee suuqa hoose. Markaas uu furmo suuqa wax soo saarka arbushin doonaa. Halkan waxaad ka dooran kartaa qaabab kale sida ay jecel yahay. Haddii aad u ciyaarto file wax soo saarka on Qalabka telefoonada gacanta, u leexdo xagga ee "Device" tab si ay u doortaan qalab gaar ah.
Markaas riix badhanka Browse ee Output Folder hoose ee barnaamijka lagu qeexi caga wax soo saarka. Hit ah "Beddelaan" button ee geeska hoose ee saxda ah ee suuqa kala barnaamijka aad u bilowdo nidaamka video qaab beddelidda. Dhowr ilbiriqsi ka dib, aad file cusub oo ka yar hal asalka heli doonaa.
> Resource > MP4 > Sida loo sameeyo MP4 yar